Oovimba beStellar-Funda ukuRhweba
I-Stellar (XLM/USD) Ixabiso linokuthi lingene kwi-$ 0.42 yeNqanaba eliphezulu
STELLAR Uhlalutyo lweXabiso - Novemba 03
Ixabiso le-Stellar linokuthi liphule izinga lokumelana ne-$ 0.42 libonelele ukuba iinkunzi zeenkomo zandisa ukukhawuleza kwazo, Inokunyusa ngaphezulu kwe-$ 0.48 kunye nenqanaba lokumelana ne-$ 0.55 linokufikelelwa.
Intengiso yeXLM / USD
Amanqanaba okumelana: $ 0.42, $ 0.48, $ 0.55
Amanqanaba enkxaso: $ 0.35, $ 0.30, $ 0.24
I-Stellar is bullish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar yayiphantsi kolawulo lwe-bullish ukususela kwiiveki ezintathu ezedlulileyo emva kokuba ifumene inkxaso kwi-$ 0.2446 ngoSeptemba 28. Kwiveki ephelileyo, ixabiso livavanya izinga lokumelana ne-$ 0.42 kwaye lihlehlise ngenxa yokuba lalingakwazi ukungena kwinqanaba. Inqanaba lenkxaso ye-0.30 yeedola yaphinda yavavanywa kwakhona. Ngomhla we-28 ka-Oktobha, iinkunzi zeenkomo zaqala kwakhona kwiimarike kwaye ukunyakaza kwe-bullish kubuyiselwe. Okwangoku, ixabiso liye lawela i-$ 0.35 kwinqanaba elibhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.42.
XLMUSD Itshathi yosuku, ngoNovemba 03
Iinkunzi zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye ixabiso liphule amanqanaba okumelana nokutshintsha phezulu. Ixabiso lirhweba ngaphezu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso le-Stellar linokuthi liphule izinga lokumelana ne-$ 0.42 libonelele ukuba iinkunzi zeenkomo zandisa ukukhawuleza kwazo, Inokunyusa ngaphezulu kwe-$ 0.48 kunye nenqanaba lokumelana ne-$ 0.55 linokufikelelwa. Ixesha lesalathiso samandla anxulumeneyo i-14 ikwinqanaba le-60 lokugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-XLM / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ze-4. Ixabiso lidibanisa iintsuku ezimbalwa emva kokuvavanya izinga lokumelana ne-$ 0.42. Irhole umva ukubuyisela inqanaba lenkxaso ye-0.35 yeedola kwaye yaba nokuqhawuka kwenxalenye. Iinkunzi zenkomo ziphazamise ukuhamba kweebhere kwaye ixabiso lenyuka libhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.42 kwinqanaba okwangoku. Kwimeko yokumelana nenqanaba le-$ 0.42 yezinga libamba, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane nenqanaba lenkxaso ye-$ 0.35, i-$ 0.30 kunye ne-$ 0.24.
Itshathi ye-XLMUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 03
I-Stellar ithengisa ngaphezu kwexesha le-9 i-EMA kunye ne-21 ye-EMA kunye ne-Relative Strength Index amaxesha i-14 ingaphezulu kwamanqanaba e-60 kunye nomgca wesignali obonisa umqondiso wokuthenga.
tags Marketing, Stellar, Uhlalutyo Technical
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso elinokuthi libuye umva kwimeko ye-0.24 yeNqanaba leNkxaso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Septemba 29
Ixabiso leStellar linganciphisa ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphantsi leedola eziyi-0.19 kwaye linokwanda liye kuthi ga kwi-0.14 yeedola ngaphandle kokuba iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.24 kunye nekhandlela lemihla ngemihla elingaphantsi kwalo. Kwimeko apho abathengi bakhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.24, amaxabiso anokuqalisa ngokunyuka kwayo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.30, $ 0.34, kunye ne- $ 0.48.
Amanqanaba okumelana: $ 0.30, $ 0.35, $ 0.42
Amanqanaba enkxaso: $ 0.24, $ 0.19, $ 0.14
I-XLM / i-USD yexesha elide iTrend: Ukuthwala
Kwitshathi yemihla ngemihla, iStellar yi-bearish. Iinkunzi zityhale amaxabiso kwinqanaba ngalinye lokumelana ne- $ 0.42 nge-Septemba 06. Ikhandlela elikhulu lemihla ngemihla eliqinileyo elenziwe kwaye lenza ikhandlela langaphambili. Ixabiso liyehla kwaye lingene kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.35 kunye ne- $ 0.30. Amakhandlela amaninzi e-bearish ayavela kwaye ahle aye kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.24. Iyancipha ngakumbi ngoxinzelelo lweebhere kwaye kuvavanya inqanaba lenkxaso kwi $ 0.24 ngalo mzuzu.
I-XLMUSD itshathi yemihla ngemihla, ngoSeptemba 29
I-Stellar ingene kumanqanaba enkxaso enamandla asezantsi. I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso leStellar linganciphisa ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphantsi leedola ezili-0.19 kwaye linokwanda liye kuthi ga kwi-0.14 yeedola ngaphandle kokuba iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.24 kunye nekhandlela lemihla ngemihla elingaphantsi kwalo. Kwimeko apho abathengi bakhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.24, amaxabiso anokuqalisa ngokunyuka kwayo kumanqanaba okumelana ne- $ 0.30, $ 0.34, kunye ne- $ 0.48.
I-XLM / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
I-Stellar ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Abathengisi babambelele kwimarike yaseStellar emva kokulahlwa kwexabiso ngesiquphe kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42. I-crypto iqale intshukumo eyahlukeneyo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35 kunye nenqanaba lokuxhasa le- $ 0.30. Iibhere zaphule inqanaba lenkxaso le- $ 0.30 ngoSeptemba 20. Ixabiso livavanya inqanaba lenkxaso le- $ 0.24.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, ngoSeptemba 29
Njengophawu lwentengiso ye-bearish, iStellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Nangona kunjalo, amaXesha amaNani aMandla aNxulumene naMandla amaxesha angama-14 angaphezulu kwamanqanaba angama-40 kunye nomgca wophawu olalatha phezulu ukubonisa umqondiso wokuthenga onokubuyela umva.
tags imarike, Stellar, Uhlalutyo Technical
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso: Ngaba iBears 'Pressure Break down $ 0.24 Inqanaba leNkxaso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Septemba 22
Kwimeko apho iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.24 kwaye ikhandlela lemihla ngemihla livala ngaphantsi kwayo, ke, ixabiso leStellar linganciphisa liye kumaqondo aphantsi angaphantsi kwe- $ 0.19 amanqanaba kwaye linokwanda liye kwi-0.14 yeedola. Xa abathengi bekhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.24, amaxabiso anokuqalisa ngokunyuka kwayo kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 0.30, $ 0.34, kunye ne- $ 0.48.
Amanqanaba okumelana: $ 0.30, $ 0.34, $ 0.48
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, abathengi baphulukana namandla kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Iibhere zithathe indawo yentengiso kunye nokwenziwa kwekhandlela elikhulu lemihla ngemihla elihambisa amakhandlela angaphambili. Ixabiso liyehla kwaye laqhekeza amanqanaba enkxaso ye- $ 0.35 kunye ne- $ 0.30. Ihambela ezantsi kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.24. Ukonyuka koxinzelelo lweebhere kunokwaphula inqanaba lenkxaso kwi $ 0.24.
I-XLMUSD itshathi yemihla ngemihla, ngoSeptemba 22
I-Stellar iye yaphula amanqanaba enkxaso enamandla. I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kumgama omde. Kwimeko apho iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.24 kwaye ikhandlela lemihla ngemihla livala ngaphantsi kwayo, ke, ixabiso leStellar linganciphisa liye kumaqondo aphantsi angaphantsi kwe- $ 0.19 amanqanaba kwaye linokwanda liye kwi-0.14 yeedola. Xa abathengi bekhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.24, amaxabiso anokuqalisa ngokunyuka kwayo kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 0.30, $ 0.34, kunye ne- $ 0.48.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. I-crypto yayihamba ngokuhamba ngeveki ephelileyo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35 kunye nenqanaba lokuxhasa le- $ 0.30. Nge-20 kaSeptemba, iibhere zongamela iinkunzi zeenkomo ukuba ziphume kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.30. Ixabiso lisingise kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.24.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, ngoSeptemba 22
I-Stellar ngoku ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentengiso ye-bearish. Amaxesha esalathiso soMbane oNxulumene naMandla ama-14 akumanqanaba angama-30 kwaye umgca womqondiso usalatha phezulu ukubonisa umqondiso wokuthenga onokubuyela umva.
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso: Inqanaba lokumelana ne- $ 0.42 Iyala ukwandiswa okuqhubekayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Septemba 08
Kwimeko apho iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.30 kwaye ikhandlela lemihla ngemihla livala ngaphantsi kwayo, ke, ixabiso leStellar linganciphisa liye kumaqondo aphantsi angaphantsi kwe- $ 0.19 amanqanaba. Ukuba abathengi bayayikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.30, amaxabiso anokuqhubeka nokunyuka kwayo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42, $ 0.48 kunye ne- $ 0.55.
Amanqanaba enkxaso: $ 0.30, $ 0.24, $ 0.19
I-Stellar inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar yayilawulwa ngamabhere kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Intshukumo ye-bearish yaphazanyiswa ziinkunzi kwinqanaba leedola le-0.35. Amandla eenkomo akhule ngokwenziwa kwamakhandlela anyusa ngakumbi. Ixabiso liyonyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Nge-07 kaSeptemba, abathengisi bakhusele inqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kwaye bandise umfutho wabo ngokusekwa kwekhandlela elikhulu lemihla ngemihla elenza ixabiso lokuphinda libone inqanaba lenkxaso le- $ 0.30.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, nge-08 kaSeptemba
I-Stellar idiliza amanqanaba enkxaso enamandla. I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, oku kunokuba kukubuyela umva. Kwimeko apho iibhere ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.30 kwaye ikhandlela lemihla ngemihla livala ngaphantsi kwayo, ke, ixabiso leStellar linganciphisa liye kumaqondo aphantsi angaphantsi kwe- $ 0.19 amanqanaba. Ukuba abathengi bayayikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 0.30, amaxabiso anokuqhubeka nokunyuka kwayo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42, $ 0.48 kunye ne- $ 0.55.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Iinkunzi zilinyusile ixabiso ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.42 nge-06 kaSeptemba. Ipateni yekhandlela leenkwenkwezi yangokuhlwa eyenziwe kwinqanaba elikhankanyiweyo kwaye ixabiso lathobela le patheni yekhandlela ye-bearish. Ixabiso liyehla kwaye lihlehlise inqanaba le- $ 0.35. Inqanaba lenkxaso le- $ 0.30 liyavavanywa kwaye liyabuyisa kwinqanaba okwangoku.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, Septembe 08
I-Stellar ithengisa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentengiso ye-bearish. Amaxesha esalathiso samandla osalamano se-14 akumanqanaba angama-40 kwaye umgca womqondiso usalatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso: I-Bears Oppose Bulls kwinqanaba le- $ 0.41
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Agasti 25
Iinkunzi zeenkomo zinokutyhala ixabiso liye kuthi xhaxhe kwinqanaba leedola le-0.30 kwaye linokungena kulo, ukuba oku kuyenzeka, ukwehla kwexabiso kuye kuthi ga kwi-0.22 yeedola kunye ne-0.16 yamanqanaba enkxaso kunokwenzeka. Ukusilela ukophula iqondo leedola i-0.30 kungakhokelela ekuhambeni okungafaniyo, amanqanaba oxhathiso ngaphezulu kwexabiso langoku anokufumaneka kwi- $ 0.42, $ 0.50 nakwi- $ 0.57.
Amanqanaba okumelana: $ 0.41, $ 0.50, $ 0.57
Amanqanaba enkxaso: $ 0.30, $ 0.22, $ 0.16
I-Stellar ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-crypto ibiphantsi kolawulo lweenkunzi zeenkomo ngaphezulu kweeveki ezimbini. Isantya sokunyusa sityhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.41. Uxinzelelo lweenkunzi aluphumelelanga kwaye ixabiso labuyela kwinqanaba le-0.30 yeedola. Nge-24 ka-Agasti ikhandlela ye-bearish eyomeleleyo yavela yaza yagubungela ikhandlela lemihla ngemihla elidlulileyo. I-Stellar iyancipha kwaye ingene kumanqanaba enkxaso enamandla.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, Agasti 25
I-Stellar izama ukophula amanqanaba enkxaso enamandla. I-Stellar iyarhweba phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentshukumo ye-bearish. Iinkunzi zeenkomo zinokutyhala ixabiso liye kuthi xhaxhe kwinqanaba leedola le-0.30 kwaye linokungena kulo, ukuba oku kuyenzeka, ukwehla kwexabiso kuye kuthi ga kwi-0.22 yeedola kunye ne-0.16 yamanqanaba enkxaso kunokwenzeka. Ukusilela ukophula iqondo leedola i-0.30 kungakhokelela ekuhambeni okungafaniyo, amanqanaba oxhathiso ngaphezulu kwexabiso langoku anokufumaneka kwi- $ 0.42, $ 0.50 nakwi- $ 0.57.
I-Stellar i-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Stellar ibetha inqanaba lokuchasana le- $ 0.42 ngo-Agasti 10. Ukukhula kweenkunzi zenkomo akunakulichitha eli nqanaba likhankanyiweyo. Ibuyile yaya kwinqanaba elaphukileyo kwaye yenza umzamo wesibini wokuqhekeka kwi- $ 0.42. Isenzo sexabiso kwitshathi yeeyure ezi-4 senze ipateni emfutshane “yetshathi” M. Kukho ukutyekela kwexabiso lokuwa.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, Agasti 25
I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixesha lamaXabiso aMandla aNxulumene namaXesha angama-14 akumanqanaba angama-40 kwaye umgca womqondiso ukhombe ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ixabiso le-XLM / USD (i-Stellar) Ixabiso: Iinkunzi zeenkomo ziqokelela ixesha lokulawula
Ukuhlaziywa: 30 Juni 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-nge-30 kaJuni
Ukonyuka okuthe kratya kweenkunzi zeenkomo kungaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.30, enokuthi ikhokelele ekunyuseni amaxabiso ukuya kwi-0.42 yeedola, kamva inokuthi inyuke iye kwinqanaba leedola le-0.50. Kwimeko apho uxinzelelo lweenkunzi zeenkomo alunakho ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 0.30, iibhere zinokuqhubeka nokulawula intengiso yeStellar kwaye ixabiso lingehla liye kwi-0.22, i-0.16 yeedola kunye ne-0.11 yamanqanaba enkxaso.
Amanqanaba okumelana: $ 0.30, $ 0.42, $ 0.50
Amanqanaba enkxaso: $ 0.22, $ 0.16, $ 0.11
Kwitshathi yemihla ngemihla, iStellar yi-bearish. Isantya se-bearish sityhale ingqekembe kwinqanaba lokuxhasa i-0.22 yeedola. Uxinzelelo lwabathengisi luba buthathaka kwaye inqanaba elikhankanyiweyo alinakungena. Kwiveki ephelileyo, iinkunzi zeenkomo ziye zonyusa kancinci amandla azo okutyhala ingqekembe kwicala elingasentla. Ixabiso lingene ngokukhawuleza okuchasayo okuchasayo ukubonisa ukwanda koxinzelelo lweBulls.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, nge-30 kaJuni
I-Stellar iyarhweba phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukwanda kwesantya sokunyuka. Ukonyuka okuthe kratya kweenkunzi zeenkomo kungaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.30, enokuthi ikhokelele ekunyuseni amaxabiso ukuya kwi-0.42 yeedola, kamva inokuthi inyuke iye kwinqanaba leedola le-0.50. Kwimeko apho uxinzelelo lweenkunzi zeenkomo alunakho ukwahlula inqanaba lokumelana ne- $ 0.30, iibhere zinokuqhubeka nokulawula intengiso yeStellar kwaye ixabiso lingehla liye kwi-0.22, i-0.16 yeedola kunye ne-0.11 yamanqanaba enkxaso. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihambelanayo ne-14 iyagoba kwinqanaba lama-40 ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-XLM ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Isantya se-bearish sakhatywa kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.22 ngoJuni 22. Ikhandlela elikhuselayo elikhuselweyo lenze ukuba inyuse isenzo sokunyusa. Ixabiso liyenyuka kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.30. Okwangoku, iyaqhuba ukubuyela umva.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, nge-30 kaJuni
Ixabiso lithengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokuhamba ngenkuthalo. Nangona kunjalo, ixesha eli-14 lamandla aMandla aNxulumene naMandla akumanqanaba angama-50 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ixabiso leXLM / USD (iStellar) linokunyuka liye kwi-0.30 yeNqanaba leNkxaso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-nge-09 kaJuni
Ixabiso linokuhla kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.30, xa iibhere zonyusa isantya sazo, kwaye ixabiso lingehla liye ezantsi kwi- $ 0.22, enokuthi inyuke iye kwinqanaba le- $ 0.16. Kwimeko apho iibhere azinakho ukophula inqanaba lenkxaso le- $ 0.30, iinkunzi zeenkomo zinokuthatha indawo kunye nokunyuka kwexabiso ukuya kuthi ga kwi-0.42, i-0.50 yeedola kunye ne-0.57 yeedola.
Amanqanaba okumelana: $ 0.42, $ 0.50, $ 0.57
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Abathengi bandise umfutho wabo kwiveki ephelileyo kwaye babuya nexabiso kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.30 ukuya kwinqanaba le- $ 0.42. Ukudibana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kuthintela ukonyuka kwamaxabiso. Nge-04 kaJuni, kuvela ikhandlela le-bearish kwaye intshukumo ye-bearish yabuyiselwa. Ixabiso liyehla ngokuthe chu ukuya kuthi ga ezantsi kwi-0.30 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, nge-09 kaJuni
Ixabiso leStellar liyancipha, ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA adibanisa ukwanda kwe-bearish. Ixabiso linokuhla kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.30, xa iibhere zonyusa isantya sazo, kwaye ixabiso lingehla liye ezantsi kwi- $ 0.22, enokuthi inyuke iye kwinqanaba le- $ 0.16. Kwimeko apho iibhere azinakho ukophula inqanaba lenkxaso le- $ 0.30, iinkunzi zeenkomo zinokuthatha indawo kunye nokunyuka kwexabiso ukuya kuthi ga kwi-0.42, i-0.50 yeedola kunye ne-0.57 yeedola. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 iyagoba kumanqanaba angama-30 ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-XLM ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Umfutho weebhere ngaphezulu kwamandla eenkomo kwimarike yaseStellar xa ixabiso lingenakuphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba le- $ 0.30. Ixabiso lingaqhubeka ukwehla liye kuthi ga kwi-0.22 yeedola ngaphandle kokuba iibhere zigcina okanye zonyusa uxinzelelo lwazo.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, ngoJuni 09
Ixabiso liwele amaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwicala eliphantsi kwaye ithengisa ngezantsi kwee-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso samandla ahlobene namanqanaba angama-14 akumanqanaba angama-30 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ixabiso leXLM / iUSD (iStellar) lifikelela kwinqanaba lokuGuqulwa kweBullish
Ukuhlaziywa: 26 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Meyi 26
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zigcina amandla azo, ixabiso liza kuyaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.50, kwaye ixabiso liya kufikelela kwinqanaba eliphakamileyo le- $ 0.57, elinokuthi lande liye kwinqanaba le- $ 0.67. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazi ukwaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.50, intshukumo ye-bearish inokuqhubeka iye kwi-0.42 yeedola, $ 0.33 kunye ne- $ 0.22
Amanqanaba okumelana: $ 0.50, $ 0.57, $ 0.67
Amanqanaba enkxaso: $ 0.42, $ 0.33, $ 0.22
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iinkunzi zazinikezela ngenxa yeebhere ngomhla we-19 kaMeyi, xa iibhere zanyusa imarike ngamandla. Oku kuyaqatshelwa ngokwenziwa kwekhandlela le-bearish. Ikhandlela liye lagubungela iintsuku ezintlanu ezidlulileyo. I-Stellar iphantsi kolawulo lweebhere. Uxinzelelo lwe-bearish lwehle ixabiso ukuya kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.33 kwinqanaba. Iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba ngokwenziwa kwamakhandlela akhulayo okwangoku.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, ngoMeyi 26
Ixabiso leStellar liyakhula, ukuzama ukungena kumaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ejongene nokunyuka kokunyuka kwamandla. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zigcina amandla azo, ixabiso liza kuyaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.50, kwaye ixabiso liya kufikelela kwinqanaba eliphakamileyo le- $ 0.57, elinokuthi lande liye kwinqanaba le- $ 0.67. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazi ukwaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.50, intshukumo ye-bearish inokuqhubeka iye kwi $ 0.42, $ 0.33 kunye ne- $ 0.22. Ixesha lesalathiso samandla xa kuthelekiswa ne-14 iyagoba kwinqanaba lama-40 ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-XLM ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Stellar ifumene inkxaso kwinqanaba le-0.33 yeedola. Iphuma kwinqanaba ngokwenziwa kwekhandlela lekhonkco. Olu luphawu olushukumisayo lokuguqula imeko kwintengiso yeStellar. Okwangoku, ixabiso liyanda kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.50.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, ngoMeyi 26
Ixabiso liwele amaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA phezulu kwaye ithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso sokomelela kwesihlobo linama-14 akumanqanaba angama-60 akhomba phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Stellar (XLM) ibuyisa ngaphezulu kwe- $ 0.45 yeNkxaso, iiNdawo zokuNyukela phezulu kungekudala
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.65, i-$ 0.70, i-$ 0.85
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.30, $ 0.25, $ 0.20
I-Stellar ikwi-uptrend njengoko ifikelele kwi-0.60 ephezulu yeedola. I-crypto ixhathisiwe kwinqanaba eliphezulu kutshanje njengoko amaxabiso abuyisiwe kwaye afumana inkxaso ngaphezulu kwe- $ 0.45. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso yangoku ibambe. Nangona kunjalo, i-downtrend iya kuphinda iqhubeke ukuba inkxaso ye-0.45 yeedola iyaqhekeka.
I-XLM / USD-Itshathi yemihla ngemihla
I-XLM ikwinqanaba lama-65 leSalathiso seMandla esiNxulumene naMandla ixesha le-14. Le ngqekembe ikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Kukho amathuba okunyuka kwamaxabiso. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-SMAs ezibonisa ukunyuka okuphezulu kwengqekembe.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto inyukela phezulu emva kokuzama kwakhona inkxaso ye-0.45 yeedola. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukunyuka okuphezulu kweStellar. NgoFebruwari 13 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-XLM inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-2.0 yeFibonacci eyandisiweyo. Eli linqanaba eliphezulu leedola 0.8373.
XLM / USD -4 Itshathi yeYure
I-Stellar ikwi-bullish umfutho njengoko ithengisa ngaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ukukhula okunyukayo kuyaguquguquka. Ii-SMAs zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
I-Stellar inyukele phezulu. I-crypto ngaphambili yayikwiimarike zebhere. I-cryptocurrency iya kuphinda iqale kwakhona ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukumelana ne- $ 0.60. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kunyuka iye kwinqanaba le-0.8373.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, Stellar, XLM, I-XLM / i-USD